उद्योगमन्त्री जोशी लन्डनमा- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ५, २०७३ नवीन पोखरेल
काठमाडौं — लन्डन । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी शनिबार बिहान लन्डन आइपुगेका छन् । सिटी अफ लन्डनका लर्ड मेयर डा. एन्ड्रियू पार्मलीको निमन्त्रणामा उनी बेलायत आएका हुन् ।
लन्डन । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी शनिबार बिहान लन्डन आइपुगेका छन् ।
सिटी अफ लन्डनका लर्ड मेयर डा. एन्ड्रियू पार्मलीको निमन्त्रणामा उनी बेलायत आएका हुन् । लर्ड मेयर पार्मली जनवरी अन्तिम साता नेपालको चारदिने भ्रमण गएका बेला जोशीलाई बेलायत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
मन्त्री जोशी आगामी २२ मार्च बुधबार म्यान्सन हाउसमा आयोजना हुने नेपालमा हाइड्रो लगानी सम्भाव्यतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशेष वक्ता हुनेछन् । कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिस र डिएफआइडी मन्त्री रोरी स्टेवार्ट समेत वक्ताका रुपमा छन् ।
बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको द्विशतवार्षिकी समापन समारोहअन्तर्गत लन्डन दूतावासमा आयोजना हुने व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी अन्तरक्रिया, राजकुमार हयारी सहभागी हुने २० मार्चको समापन समारोह, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायत र एनआरएनए यूकेको कार्यक्रममा समेत मन्त्री जोशीको सहभागिता रहनेछ । उनले बेलायती राजनीतिज्ञ र उद्योगी व्यवसायीलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम छ ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७३ १४:५५
थोराङ्ला उक्लन थाले पर्यटक
चैत्र ५, २०७३ आश गुरुङ
लमजुङ — बाक्लो हिमपातका कारण बन्द चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग खुलेको छ । पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पदमार्ग र सहायक मार्गका हिउँ हटाएसँगै पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । केही ठाउँमा पर्यटक हिउँ छिचोल्दै हिँड्न थालेका छन् ।
बाक्लो हिमपातका कारण बन्द चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग खुलेको छ । पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।
पदमार्ग र सहायक मार्गका हिउँ हटाएसँगै पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । केही ठाउँमा पर्यटक हिउँ छिचोल्दै हिँड्न थालेका छन् । नेपाली सेना, प्रहरी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), होटल व्यवस्थापन उपसमिति, स्थानीय होटल व्यवसायी लगायत संघसंस्थाले हिमपातका कारण अवरुद्ध पदमार्ग खुलाएका हुन् । मनाङ र मुस्ताङको सीमाक्षेत्र थोराङ्ला भञ्ज्याङ (५, ४१६ मि.) सम्मको हिमपात हटाएपछि पर्यटक हिँड्न थालेको एक्याप मनाङका संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरुवाले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो मनाङदेखि थोराङ्ला भञ्ज्याङ साथै खाङ्सार तिलिचो तर्फको बाटो खुलाइएको छ । ‘बाटो खुलाइएपछि दैनिक ५० जना पर्यटक माथिल्लो क्षेत्र (थोराङ्ला र तिलिचो) जान थालेका छन्’ उनले भने । उनका अनुसार यीमध्ये धेरैजना थोराङ्ला चढेर मुक्तिनाथ गएका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो हप्ता भएको हिमपातले बाटो अवरुद्ध बनाएको थियो । २/३ दिन लगाएर बाटो खुलाएसँगै मंगलबारदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढेको उनले बताए ।
सदरमुकाम चामे र वरपरका पदमार्ग साथै सडकमा जमेको हिउँ सेना र प्रहरी मिलेर हटाएको छ । लमजुङको सीमावर्ती क्षेत्र तालदेखि धारापानीसम्मको सडकमा ठूलाठूला ढुंगा खसेकोमा डिभिजन सडक कार्यालय नं. १, दमौलीको सहयोगमा उक्त बाटो पनि खुलाएको मनाङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले बताए । सडक खुलाएसँगै बिहीबारदेखि बेंसीसहरबाट चामेसम्म सहजरुपमा सवारी गुड्न थालेको उनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर जिल्लामा यातायात सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन हिउँ हटाउने कार्यमा सेना प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाक्लो हिमपातले मनाङको तिमाङदेखि खाङसारसम्मको सडक पुरै अवरुद्ध भएको र सडक सफा भइरहेको पन्तले बताए । यसका लागि जिल्ला विकास समिति मनाङले सहयोग गरेको छ ।
सडकमा बाक्लो हिउँ जमेका कारण पदयात्रीलाई कठिनाई भए पनि उनीहरुले सहज मानेर माथिल्लो क्षेत्र जाने गरेको उनले बताए । ‘सहज ठाउँमा सेना, प्रहरी साथै सरकारी कर्मचारीसमेत खटियौं । अप्ठ्यारो ठाउँमा हिउँ फाल्न एक्साभेटर प्रयोग गरिएको छ’ उनले भने । उनका अनुसार चामेदेखि माथिल्लो मनाङसम्मको सडकमा जमेको हिउँ हटाउन एक्साभेटर प्रयोग गरिएको हो । कतिपय ठाउँमा मजदुर प्रयोग गरेर हिउँ पन्छाइएको उनले बताए । उनका अनुसार विकट ना र फू जाने बाटोबाट पनि स्थानीय आवतजावत हुन थालेका छन् ।